डोनाल्ड ट्रम्प « Image Khabar
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको टाउकोमा अरर्बौ ऋणको भार, तीन वर्षपछि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न वित्तीय व्यवस्थापन चुनौति बन्दै
ट्रम्पको व्यवसायमा १ दशमलव ३ बिलियन डलर ऋण रहेको अनुमान छ भने २ सय मिलियन डलर उनले राष्ट्रपति पद छाडेयता बढेको बताइएको छ ।
एजेन्सी । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि कर छलीको आरोप लागेको छ । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको कम्पनी र यसका वित्त प्रमुख एलेन वेसलवर्गले कर छली गरेको आरोप लागेको बीबीसीले जनाएको
ट्रम्पको भिडियो फेसबुकमा प्रतिबन्ध
एजेन्सी । फेसबुकले पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एक भिडियो उनकी बुहारी लारा ट्रम्पको पेजबाट हटाएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले गत जनवरीमा वासिङटनस्थित संसद् भवनमा ट्रम्पका समर्थकहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेपछि
अमेरिकी विदेश विभागको तथ्याङ्क अनुसार यात्रा प्रतिबन्धका कारण करिब ४० हजार मानिसले अमेरिका प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । ट्रम्प प्रशासनले ईरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान, सिरिया, यमन लगायत १३ देशबाट अमेरिका
एजेन्सी । संसद भवन क्षेत्रमा सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटन डिसीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प समर्थकले प्रदर्शन गर्ने भएपछि वासिङ्गटनको सुरक्षाको व्यवस्था
दश सेकेण्डको भिडियोका लागि ७७ करोड ! के छ खास ?
एजेन्सी, फागनु १८ । तपाईंको थोरै मेहनतले पनि कति बेला तपाईंको भाग्य चम्काइदिन्छ भन्न सकिन्न । त्यस्तै भएको छ, अमेरिकाको मियामीमा रहने एक कला संकलकले बनाएको एउटा दश सेकेण्डको कलात्मक
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो सम्पति विवरण बुझाउन अदालतले आदेश दिएको छ । ट्रम्पमाथि कर छलीलगायत वित्तीय अपराध भएको आशंकामा सर्वोच्च अदालतले सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश दिएको हो
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई यसअघि अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग रोकेको थियो । सुरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिँदै